Times24 Nepal » यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं !
पोईसा पाउन तल कमेन्ट गरि अबस्य सेयर गर्नुहोला।।।
अहिले विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । गत डिसेम्बरमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ नामको कोरोना भाइरस अहिले १८० भन्दा बढी देशहरुमा संक्रमण देखिएको छ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सक्रमण हुन सक्ने भन्दै सरकारले पुर्बसतर्कता अपनाएको छ । यसै बिचमा सरकारले चैत १० गते बाट लामो दुरिका सार्बजनिक यातायात चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरे सङ्गै सर्बसाधरण यात्रुहरु घर जानको लागि बस स्टेसन मा निकै भिड्भाड देखिएको छ । भिडभाड देखिए सङ्गै यातायात व्यावसायि सर्बोच्च महासङ्घ ले सरकार सङ्ग आबश्यक समन्वय गरेर घर जाने यात्रुहरुलाइ थप सुबिधाको साथमा १० गते भन्दा पछाडी पनि सहज तरिकाले यात्रुहरुलाइ गन्तब्य स्थलमा पुर्याउने भएको छ । त्यसैले कसैलाइ पनि नआत्तिन र सार्बजनिक यातायात मा सहज तरिकाले यात्रा गर्न आवह्वान गरेको छ । यात्रुहरुको समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै यातायात व्यावसायि सर्बोच्च महासङ्घ ले १० गते भन्दा पछाडि पनि यात्रालाइ सहज बनाउने जनाएको छ ।
यातायात व्यावसायि सर्बोच्च महासङ्घ
काठमाडौं । हरेक फलफुल खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ। तर केहि फलफुल यस्ता रोगीहरुले नखानु राम्रो हुन्छ। अनारले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। तर यी ७ व्यक्तिले अनारले खानु राम्रो हुदैन। स्वस्थ्यमा सुधार आउनुको साटो झन् बिग्रिन सक्छ।
नेपालमा वि.स. ९३६ देखि हालसम्म के–के भयो ? हेर्नुस….
काठमाडौं / एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधिनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो । विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
नेपाल शब्द सबैभन्दा पहिला अथर्ववेदमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसअनुसार नेपाल हिमालको काखमा भएको कारणबाट नेपाल नामको उत्पत्ति संस्कृत शब्द ‘निपालय’ बाट भएको हुन सक्छ, जस्को अर्थ “पहाडको आधार ९खुट्टा०” अथवा “खुट्टामा निवास” हो। अब कुरा गरौँ, इतिहासको बारेमा । विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’को भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा ‘इतिहास वर्तमानको गर्व हो । जहाँबाट वर्तमान जन्मिन्छ । वर्तमान फेरि इतिहास हुन्छ भविष्यका निम्ति ।’
यहाँ अत्यन्त सारंशमा वि।स ९३६ देखि वि.स. २०७० सम्ममा भएका उल्लेखनीय घटनाक्रमहरूलाई उल्लेख गरिएको छ:
प्रकाशित मिति २० चैत्र २०७६, बिहीबार ०६:१३